ဘရာဇီး ငှက်ရိုး: ကိုရဲမြင့်၏ status
January6at 4:02pm ·
စစ်တပ် က ကျောင်းသားတွေကို သတ်တာ ရန်သူတော်အချင်းချင်းသတ်တာ။ရဲဘော်ရဲဘက်ချင်းဖြစ်တဲ့တော်လှန်ရေးကျောင်းသားအချင်းချင်း အာဏာရူးထပြီး အာဏာလုပွဲတွေကို ပဲခူးရိုးမမှ ဖြစ်ခဲ့ တဲ့ဗကက တွေရဲ့ဖြုတ်ထုတ်သတ် လူသတ်ပွဲက အဘ ခေါ်ရလောက်အောင် လက်တွေ ခြေတွေကို ယမ်းပျော့နဲ့ ကပ်ခွဲသတ်တာမျိုး မိန်းကလေးတယောက်ကို မကြားရက်လောက်အောင် လုပ်ပြီးမှ သတ်တာမျိုး (ဖတ်သာကြည့် တော့။ သူတို့ ဖြစ်ခဲ့ တာတွေကို) ဒါမျိုးတွေကို စစ်တပ်က ကျောင်းသားတွေကို သတ်တာနဲ့ညီမျခြင်းမဆွဲချင်ကြနဲ့ ။ ကျူးလွန်ခဲ့ တဲ့ ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်ကြီးများ ဆိုသူများက အဲ့ ဒီဆင်ခြေနဲ့ထွက်ပေါက်လုပ်ဖို့ ကြိုးစားခဲ့ တာ ကြားခဲရ့ြ့ပီရော ပေါ့ ။ နာဇီဂက်စတာပိုရော ဂျပန်ကင်ပေတိုင်ရော အဘလို့ခေါ်ရမဲ့ ဒီလူတွေထဲက တယောက်ဆို အမေရိကားက လူ့ အခွင့် အရေးချိုးဖောက်မှုနဲ့ကျောင်းလာတက်ခွင့် မပေးခဲ့ ဘူး။ စစ်တပ်က အာဏာရူးကြီးတွေလည်း အချိန်တန်ရင် ဥပဒေနဲ့ ရင်ဆိုင်စေရမှာဘဲ။
Ye Myint Htuu Sann >>>> အာဏာရှင်နဲ့တော်လှန်တဲ့သူဆိုတာ ရန်သူတွေပါပဲ။ရန်သူအချင်းချင်းသတ်ကြတာကသဘာဝတစ်ခုပါ။ နိုင်တဲ့သူကအမှန်ဆိုတဲ့မူနဲ့လည်း အပြစ်ပေးစီရင်တတ်ကြပါတယ်။ဒါလည်းဖြစ်ရိုးဖြစ်စဉ်ပါ။ဒါပေမယ့် တော်လှန်တဲ့ရဲဘော်ရဲဖက်ချင်းနောက်ကျောဒါးနဲ့ထိုးတာ မတရားလုပ်ကြံသတ်ဖြတ်တာကတော့ သဘာဝမဟုတ်ပါဘူး။ဒါဟာရန်သူချင်းတိုက်ခိုက်တာမဟုတ်ဘဲ ရဲဘော်ရဲဖက်ချင်းသစ္စာမဲ့မှုပါ။ ဘယ်သူ့ဖက်မှလိုက်မပြောပါ။ဘယ်ဖက်ကမှလည်းမဟုတ်ပါ။သို့သော် မတူညီတာနှစ်ခုကို နှိုင်းယှဉ်ပြောလို့မရတာ ကိုထောက်ပြရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
Ko Lin Wai Aung, Nicky Shein, UZa Wana and2others like this.
UZa Wana ကိုရဲမြင့် နည်းလမ်းကျတဲ့ထောက်ပြမှုပါ
January6at 4:10pm · Like · 1
Ye Myint မှတ်သာထားကြ။ အမှန်တရား ကို ရစေရမယ်။
January6at 4:17pm · Edited · Like · 1
Ye Myint မကြားဘူး မဖတ်ခဲ့ ဘူးရင် ကျနော်ပြောပြမယ်။ ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ပြီးတော့နုရင်ဘတ်စစ်ခုံရုံးမှာ စစ်တရားခံ နာဇီကြီးတွေကို သေဒဏ်ပေးတယ်။ ဂိုးအားရင်း တကောင်ဘဲ ဖွက်ယူလာတဲ့Cyanide ဆေးလုံးကို မျိုချလို့ကြိုးပေးခံရတာက လွတ်သွားတယ်။ ဒါပေမဲ့ဟစ်တလာရဲ့ SS တွေထဲမှာရော Gestapo ထဲမှာရော အားလုံးလဲသိပေမဲ့သက်သေမလုံလောက်လို့ခုံရုံးတင်မခံရတဲ့ရာဇ၀တ်ကောင်တွေက ကျန်နေသေးတယ်။ ဒီတော့မဟာမိတ်တပ်တွေဘက်က ဘာလုပ်လဲ သိလား။ ဗြိတိသျှ MI-5 နဲ့MI-6 ကလက်ရွေးစင်တွေနဲ့အထူးတပ်ဖွဲ့ ဖွဲ့ ပြီး Black Op တွေလုပ်ပြီး အဲ့ ဒီရာဇ၀တ်ကောင်တွေကို လိုက် ရှင်းပစ်လိုက်တယ်။ တောင်အမေရိက က အာဂျင်တီးနားထိအောင်တောင်လိုက်တယ်ထင်တယ်။ နာဇီဟောင်းတွေကလဲ Odessa File ထဲကလို သူတို့ ကွန်ယက်လုပ်ပြီး ပြေးတော့ ပြေးတာဘဲ။
January6at 5:15pm · Edited · Like
K Ki Ki ဒါဆို... ဗမာပြည် က .. စစ်အာဏာရှင်တွေကိုရော.. တော်လှန်ရေး ကျောင်းသားချင်း ချင်း ရက်ရက်စက်စက် သတ်ခဲ့သူ လူသတ်သမားတွေကိုရော.. အပြစ်ပေးဖို့ .. MI-5,MI-6 တွေ အကူအညီ နဲ့ ဆက်လုပ်ရမယ့် ပုံပဲ.. ။
January6at 6:08pm · Like · 1
Ye Myint ဟုတ်ဘူး။ သူတို့လုပ်ခဲ့ တဲ့ နည်းကို ယူရမှာ။
January6at 6:19pm · Like · 1
K Ki Ki ဆရာ ကိုရဲမြင့် ကို အားကိုးပါရစေနော် ...
January6at 6:24pm via mobile · Like
January6at 6:25pm · Like · 1
K Ki Ki ရှဲလိုက်ပြီ.. ဘာ အိုင်ဒီယာ ကောင်းတွေ ကြားရမလည်း သိချင် လို့ 
January6at 6:33pm · Like
Ye Myint မကိ ကျနော် အဲ့ ဒီ status ကို ရေးတာ ကာတွန်းတခုကြောင့် ဗျ။ ကြည့် ကျနော် ပြမယ်။
January6at 6:35pm · Edited · Like
မာမီ ထား အိုက်င်္ဒယာ ကောင်းကောင်းလိုသလား ပို့ပေးမယ် ကီရေ....
January6at 7:58pm via mobile · Like · 1
Htar Htar Lwin, Khine Khine Saw Lwin, Myo Myint Thwe and9others like this.
Wyn Tin Tut · Friends with Lagoon Eain
January6at 5:45pm · Like
တကယ် မသိလို့‌မေးရတာပါ...AB (n) လူသတ်ခဲ့တဲ့ကိစ္စ..ကို 88 ‌တွေဘယ်လို သ‌ဘောထားလဲ လို့... မအားလိုက်လို့ မျက်‌ခြေပြတ်သွား လို့‌မေးရ တာပါ...
January6at 8:01pm · Like
ဘရာဇီး ငှက်ရိုး အသတ်ခံရသူတွေက သူတို့ရဲ့ လက်တွဲဖော်လက်တွဲဖက် ရဲရဲတောက်တွေပါ... သတ်တဲ့သူတွေကျတော့ တိုက်ရိုက်တော့ မပတ်သတ်ဘူး... သူတို့သိလဲမသိဘူး... သူတို့သိတဲ့ သူတွေနဲ့တော့ ဆက်စပ်နေတယ်... ပြီးတော့ ၈၈တွေက အပျော့လိုင်းပါ... လက်နက်ကိုင်ဖို့ သိပ်အားမသန်ခဲ့သူတွေပါ... သူတို့ဆိုရင်ကော မေးစရာ ရှိပါတယ်... သူတို့ဖြစ်နေရင်လဲ သတ်တဲ့ကောင်တွေက သတ်မှာပဲ... ကိုကိုကြီး(ကေကျု့)ကို သူလျိုစာရင်း သွင်းထားဆဲ ဆိုတဲ့ နိုင်အောင် အုပ်စုနဲ့ ကိုကိုကြီး(ကေကျု့)ဖက်လှဲတကင်း ဖြစ်နေတာတော့ အကိုမြင်မိမှာပါ... ပြီးတော့ ဝန်ကြီးဆိုတဲ့ အောင်မင်းနဲ့ ချိပ်ဆက်ပေးတဲ့ ကိစ္စမှာ ဟိုတုန်းကတည်းက အဆက်အသွယ် မရှိရင် ဖြစ်ကို မဖြစ်နိုင်တာ... နိုင်အောင်ကိုယ်တိုင် တပည့်တွေကို ဝေါပေါ်မှာ နောင် အောင်မင်းနဲ့ တွေ့ရင် ရဲဘော်တွေကို အသိပေးပါ့မယ်ဆိုတာကြီး ရေးတင်ကတည်းက စဉ်းစားစရာပါ... ပြီးတော့ နိုင်အောင့်ဦးလေးဆိုတာက သန်းရွှေရဲ့ လူယုံ စစ်တပ်မှာ ရာထူးအတော် အတန် ကြီးသူဆိုပဲ... မျက်နှာဖုံးတွေ ကွာကျ လာတဲ့အချိန်ကို စောင့်ကြည့်လိုက်ပါ... အေဘီသာ သေချင်သေသွားမယ် ဒီသမိုင်းဘယ်တော့မှ မသေဘူး....။
January6at 8:10pm · Like · 1
‌ကျေးဇူးပါ... ၈၈တွေက အပျော့လိုင်း လက်နက် မကိုင်ကြ‌ပေမဲ့ ဒီလိုပက်စက်မှုအ‌ပေါ်မှာ ‌လေသံ ပျော့‌နေကြ သလားလို့ ... ‌သေ‌သေချာချာ မသိထား‌တော့ စွပ် မ‌ပြောချင်ပါ.. ဘယ်တုန်းကမှ နိုင်ငံ‌ရေး မလုပ်ခဲ့သူ ကျား-မ ‌တွေက စာ‌အေုပ်‌တွေ ဖတ် မိ ပြီး သား သမီးခြင်းစာ ပီး ‌ဆွေ့‌ဆွေ့ကိုခုန်‌နေကြတာ ‌နေရာတိုင်းမှာ မြင်‌နေရပါတယ်...fb သုံးတဲ့အရွယ်မဟုတ်လို့ fb မှာမ‌တွေ့ရတာပါ...
January6at 8:40pm · Unlike · 1
မီဒီယာ အများစုက ဒီ ကိစ္စ ကို သာသာ‌လေး လုပ်‌နေကြတာ ... ‌သေ‌သေခြာခြာ စုံစမ်း‌ရေး မလုပ်တာလား... လုပ်ရမှာ ပျင်းတာလား.. ‌ကြောက်တာလား
January6at 8:45pm · Unlike · 1
January6at 8:46pm · Like
ဘရာဇီး ငှက်ရိုး မီဒီယာကိစ္စ ကျနော်ပြောပြမယ်... ဘီဘီစီ... ရော်နယ်အောင်နိုင်ကို ဘီဘီစိရဲ့ အပြင်ပိုင်းမှာအခုထိ သုံးနေတုန်းပဲ... VOA မြောက်ပိုင်းကိစ္စရေးတဲ့ ဂျာနယ်ဆီက သတင်း မဝယ်တော့ဘူး... အခြားကိုလဲ မဝယ်ကြဖို့ တိုက်တွန်းလို့... ဂျာနယ်က ပြည်ပက သတင်းမဝယ်တော့လို့ ရပ်လိုက်ရပြီ... ကျန်တာကတော့ ပြောမနေနဲ့တော့...
January6at 8:48pm · Like
ဖြစ်နိုင်‌ခြေက...AB ကို အ‌နောက်နိုင်ငံ‌တွေက ‌ငွေ‌ကြေးတပုံကြီး ‌ထောက်ပံ့ခဲ့ဘူး‌တော့ အခု ရှက်ကုန်ကြရလို့ ဖုံးဖုံးဖိဖိ လုပ်ကုန်ကြရပြီထင်ပါရဲ့...
January6at 8:52pm · Like
January6at 8:53pm · Like
Thinn Thinn Win မှန်တာကို မှန်တယ်၊ မှားတာကိုမှားတယ်လို့ ပြောသင့်ချိန်မှာမပြောခြင်းဟာလဲ မှန်ကန်တဲ့လမ်းပေါ်လျှောက်ခြင်းမဟုတ်ပါဘူး...
January6at 8:56pm · Unlike · 4
Htar Htar Lwin very good...
January6at 10:00pm · Like
စာ‌ပေ လွတ်လပ်ခွင့် ရလာကြ‌တော့လဲ အမှန်ကို‌ပြောရမှာ ကို လက် တွန့်‌နေကြ‌သေးတယ်.. မတန်လိုက်ကြတာ
January6at 11:18pm · Like · 1
Posted by ဘရာဇီးငှက်ရိုး at 8:12 PM